Bathi abamdingi ekhaya labadala u-Eugene de Kock | News24
Bathi abamdingi ekhaya labadala u-Eugene de Kock
Durban - Kuthiwa owayeyisikhulu emaphoyiseni ngesikhathi sobandlululo, u-Eugene de Kock, usekhishiwe ekhaya labadala elisePitoli, kubika iThe Citizen.
Lokhu kulandela izikhalazo zabasenzi abangu-50 abansundu abashaye phansi ngonyawo bathi ngeke bamnakekele.
Ngokubika kwephephandaba iSowetan, abasebenzi base-Ons Tuis Retirement Home batshele abaphathi babo ngoLwesithathu ukuthi abakhululekile ngokuba khona kukaDe Kock kule ndawo.
Laba basebenzi bakhala ngokuthi kungani elethwe kule ndawo ngaphandle kokulandela inqubo efanayo neyabanye yokuthi kuhlolwe isimo sabo futhi engekho manafayela omlando wakhe.
OLUNYE UDABA:Ngabe kumele kubuyiswane nabamhlophe?
“Sibona sengathi impilo yethu ayiphephile futhi sibatshelile nabaphathi ukuthi ngeke sikwazi ukumnakekela. Bacabanga ukuthi asiwazi umlando wethu nokuthi wayebenzani abantu abansundu,” kusho laba basebenzi abangafunanga amagama abo adalulwe.
Kuthiwa uDe Kock ushiye leli khaya ngoLwesithathu emini ephelezelwa amadoda ayisithupha ngezimoto ezintathu.
Waphuma ejele ngoshwele ngo-Febhruwari 2015 ngemuva kokuhlala iminyaka engu-20 njengoba wayegwetshwe iminyaka engu-212 ngamacala ayisithupha okubulala, ukuzama ukubulala, ukuhlasela, ukuthumba, ukutholakala nezibhamu ezingekho emthethweni kanye nenkohlakalo.